Pane Nzira Dzose dze Twitter SEO?
Muna 2017, SEO yakashandurwa kuva guru guru rekutengesera. Nhasi, kutsvaga injini yekugadzirisa haisi kungoita kuwana zvigaro zvinowanikwa nevanotsvaga injini. Kuti unzwisise zviri nani kuti SEO iri chii, unofanira kutanga uchinzwisisa nenzira dzipi dzehuwandu hwemagariro evanhu hunopindira SEO.
Yatove yakaratidza kuti rubatsiro rwemagariro ehupfumi ndechimwe chikamu chepamusoro webhusaiti yakatarwa. Zviratidzo zvehupfumi zvinogona kuwedzera nzvimbo yako yeSOO yepamusoro.
Inoshanda sezvinotevera: ukuru hwemunharaunda yako uye kubatanidzwa kwayo zvikakosha zvinokosha zvehuwandu hunokosha uye hunhu. Zvimwe, zvakagadzirwa kubva mumagariro evanhu zvinowanzoonekwa mumigumisiro yeGoogle Search. Ndicho chikonzero chikuru, chakakanganiswa Twitter chichitevera uye chibvumirano nehuwandu hwemashoko ako chinonyanya kubetsera bhizinesi rako.
Saka, nhasi, Semalt nyanzvi achakuudza pamusoro pezano rakakosha ye Twitter yako SEO optimization. Vashandise pakuita kuti ikure iwe unotevera uye yebhizimisi rako.
Twitter SEO Zviitiko Zvaunofanira Kuziva
1. Kuvandudza Kubudirira Twitter SEO Strategic
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechekugadzira hurongwa hwekugadzirira. Sezvo mutemo, mazano anotanga nechinangwa chikuru. Tsanangura chinangwa chenyu chekutanga nekusarudza kuti ndezvipi zvaunotarisira kubva kuishandisa Twitter nekuda kwekutengesa. Zvichida, unoedza kukurudzira ruzivo rwemagetsi, kutengesa basa idzva kana kuwedzera bhutiro rebhugi?
Kana wapedza nokuziva chinangwa chako, danho rinotevera nderokusarudza uye kuedza nzira dzakanakisisa dzakakwana dzekuzadzisa zvinangwa izvi.
2. Kuisa pfungwa paBrand's Voice
Ramba uchifunga: imwe neimwe tweet inoratidza chiratidzo chako. Ndokusaka tweet yako inofanirwa kuve yakatendeka kune inzwi rechiratidzo chako, rinomirira zita rako. Iva nechokwadi chekukumbira kune chinangwa chevateereri.
Chimwe chinhu chinokosha ndechekugadzirisa - shandura tweets dzako kwete kungoita chete asi kusvikira iwe une 100% wechokwadi kuti teri imwe neimwe inoratidza zvose zvaunoda kugovana nevatengi.
3. Kuramba Kuchiramba Nharaunda
Hakusi kuramba kuti kuenzanisa nyaya. Zvisinei, kana zvasvika kune Twitter, kushanda ndeye mambo. Ita kuti vateveri vaudze zvaunenge uchiita, asi edza kudzivisa nzira dzisingabhadhari - hazvisi izvo zvakakodzera kukohwa.
Pane kutanga bhora richigumburwa uye richengetedze richifamba nekubatanidza zvose: zvino uye vateveri vanogona. Tanga nekusika zvinyorwa zvinokosha izvo vanhu vanoda kusangana nazvo nekugovana. Chimwe chinhu ndechekuteerera - kupindura mibvunzo yevanhu nemhinduro, kupindura maTweets zvakananga. Usakanganwa kutora zvinyorwa chero zvataurwa, kuwedzera manotsi ako.
4. Kusarudza Zvakarurama Mashoko
Zvakakosha zvikuru kuita kuti zvinyorwa zvako zviri nyore kuwana. Iwe unofanirwa kubata Twitter yako seyese injini yekutsvaga. Edza kushandisa mazwi akafanirwa pane imwe neimwe tweet. Usakanganwa nezvema-hashtag, bio, uye mazwi-anogonawo kubatsira peji rako re Twitter.
Yeuka, kazhinji, vanhu vari kutsvaga Twitter nekuda kwemashoko. Saka, chengetedza kuti nhoroondo yako inoratidza izvo zvinoenderana nebhizinesi rako.
5. Kuchengeta Twitter Yako Traffic
Sezvavanotaura, izvo zvisiri zviyero hazvikure. Hauna kuchinja Twitter analytics? Zvino iwe zviri nani enda izvozvi nekukurumidza sezvinobvira kuti uwane chinyorwa pakarepo chekuti uri kuitei uye kuti uone kubatanidzwa kwako kwevhiki nevhiki.
Google Analytics inogona kukuudzawo kuti ndeji mapeji anoshanyira kubva ku Twitter. Idzi ruzivo ruchakupa manzwiro ehuwandu hwemotokari yako inogona kuteverwa zvakare ku Twitter.
Sezvatinoziva, Twitter inzvimbo yakazara. Gadzira mharidzo iyo ichaita kuti iwe umire kure nemakwikwi. Chengetedza zvinyorwa zvako zvinokosha uye zviri nyore kuverenga. Pamusoro pezvose, ita kuti ive yakakosha uye inobatsira, nokuti ndiyo nzira iyo Twitter SEO inoshanda Source .